Warar - Wada jir ula dagaallama aafada
Maalin ka hor Shiineeska Dhaqanka Gu'ga, COVID-19 wuxuu ku faafay si xoog leh. Cudurkaan faafa ee qof walba saameeyey wuxuu dhibaato weyn u geystey malaayiin dad ah.
Tan iyo markii uu dillaacay, Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. waxay samaynaysay dadaal kasta oo ay ku soo saarayso uguna deeqayso maaskaro, jeermis-dileyaal iyo qalab kale. Limeng Pharmaceutical waxay maal galisay in kabadan 5 milyan yuan si loo kordhiyo aqoon isweydaarsiga maaskarada caafimaadka iyo 5 mashiinada maaskaro.
Bishii Febraayo 25-keedii, Enhao Liu, oo ah agaasimaha guud ee Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. ayaa alaabada jeermiska jeermiska lagu daweeyo iyo waji-dabool u geeyay toddobo hay'adood oo ay ku jiraan xabsiyo ku yaal Gobolka Shandong. Kuwaas waxaa ka mid ah, 1000 foosto oo ah 84 jeermis dilaha ah iyo 1000 dhalo oo ah walxaha jeermiska jeermiska loogu deeqo isbitaalka ayaa laga soo diri doonaa isbitaalka ilaa Wuhan si looga hortago loona xakameeyo xaaladaha cudurka faafa ee Wuhan. Wadar ahaan 5,600 dhalo oo ah 84 jeermis dilaha iyo 1,200 foosto oo ah 84 jeermi-dile ayaa markan loogu deeqay. Qayb kasta oo ka mid ah qalabka daryeelka waxay muujineysaa mas'uuliyadda bulshada ee shirkadda Limeng Pharmaceutical, iyo muddadan gaarka ah, ficillada wax ku oolka ah ayaa loo qaadaa si loo taageero ka hortagga iyo xakamaynta cudurka faafa.
Shandong Limeng Pharmaceutical Co., Ltd. waxay ku hawlanayd cilmibaarista, horumarinta, waxsoosaarka iyo iibinta daawada Shiinaha muddo 26 sano ah, waxaana lagu qiimeeyay inay tahay shirkad tiknoolajiyad sare ku leh Jinan, oo ah qayb horumarsan oo waxtar weyn u leh daryeelka caafimaadka. warshadaha ee Gobolka Shandong, oo ah shirkad horseed u ah heerka degmada ee Jinan si isdaba joog ah. Ka sokow, sumadda sumadda Limeng waxaa lagu qiimeeyay inay tahay summad caan ku ah Jinan. Limon Pharmaceutical waxay marwalba u hogaansami doontaa falsafada ganacsiga ee "marka hore macaamilka, horay u sii soco", waxay u hureysaa inay noqoto hormoodka cuntada caafimaadka leh, waxayna wax ku darsataa dhismaha "Healthy Limon iyo China Healthy".
Dadaallo wadajir ah oo lagula dagaallamayo aafada, ficil ayaan ku jirnaa. Limon Pharmaceutical Co., Ltd. waxay qaadatay tallaabada ah inay qaado mas'uuliyadda bulshada ee shirkadda, waxayna si iskeed ah u hoggaanka u qabatay la dagaallanka cudurka faafa. Waxay lashaqeysay dadka dalka oo dhan si looga gudbo dhibaatooyinka, waxayna wax ku biirisay ku guuleysiga dagaalka lagula jiro COVID-19.